फ्लोरोसेन्ट रंग: विशेषताहरु र आवेदन
फ्लोरोसेन्ट रंजक हाल धेरै व्यापक प्रयोग गरिन्छ। अक्सर तिनीहरूले पसलहरूमा, औषधि पसल र अन्य रिटेल आउटलेट, सौंदर्य सैलून, साथै विज्ञापन मञ्चहरूमा को signboards मा देख्न सकिन्छ। तिनीहरूले धेरै उज्ज्वल छन् र जब पराबैंगनी रेज उजागर अन्धकारमा चमक गर्न सक्छन् भन्ने तथ्यलाई। मुद्रण छवि, रंगीन सुन्दर र विशेष छ। सामाग्री को मुख्य घटक को प्रतिदीप्ति छ। अक्सर यो तीन-आयामी तस्बिरहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गरिएको छ।
फ्लोरोसेन्ट रंजक पनि घर वा अपार्टमेन्ट को भित्री मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रस्तुत सामाग्री को फाइदा छवि बलियो तापमान उतार चढाव प्रतिक्रिया छैन भन्ने छ। यी पेंट्स मानिसहरूलाई बिल्कुल सुरक्षित मानिन्छ, छैन चिस्यान प्रभावित गर्न सकिन्छ। त्यो छवि जब नकारात्मक मौसम अवस्था पनि हिउँदमा महान हुनेछ, र छ।
र कसरी कहाँ किन्न?
फ्लोरोसेन्ट रंग किन्न त सजिलो छैन। आफ्नो उत्पादन महंगा मानिन्छ किनभने तिनीहरूले एक अपेक्षाकृत उच्च लागत छ। साथै, तिनीहरूले यस्तो औद्योगिक र घरेलू प्रयोगको लागि रूपमा, प्रकार मा विभाजित छन्। यस्तो मसी एक सुविधा कुनै कुरा वस्तुको बनाउनुभयो गरिन्छ के कुनै पनि सतहमा यसको आवेदन को संभावना छ कि, छ। कुनै पनि अवस्थामा, यो राम्रो हेर्न हुनेछ।
मात्र विशेष स्टोर आवश्यक फ्लोरोसेन्ट रंजक किन्न। एकै समयमा आफ्नो लागत ध्यान। यसलाई देखि छवि नकारात्मक प्रभाव रूपमा प्रतिरोधी छैन, सस्ता विकल्प हतार गर्न आवश्यक छैन, र चाँडै उनको गुण गुमाउनु हुनेछ। तपाईं चिन्ह को डिजाइन, विज्ञापन ठाउँ, लुगाफाटा संग काम गर्दै छन् भने, यो फ्लोरोसेन्ट रंजक को एक सेट खरिद गर्न सबै भन्दा राम्रो छ।
यो सामाग्री अत्यधिक प्रतिरोधी छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ (गुणात्मक भने)। आवेदन पछि, तपाईं चाँडै र सजिलै छवि सुधार्न सक्षम हुन असम्भाव्य छन्। उनको गुण गुमाउन छैन एक लामो समय को लागि रंग गर्न, यो dries पछि, वार्निश यसलाई कवर गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसैले तपाईं माहौल को विनाशकारी प्रभावबाट तस्बिरहरू सुरक्षा। घर मा, वार्निश प्रयोग गर्न सकिँदैन।
यसलाई त्यहाँ देखिने र नदेखिने फ्लोरोसेन्ट रंग हो कि उल्लेख गर्नुपर्छ। दोस्रो प्रकार को peculiarity दिन को समयमा तपाईं छवि देख्ने हो। तपाईं पहिलो विकल्प प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, प्रकाश मा चित्र व्यावहारिक पारंपरिक पेंट्स द्वारा आएको ती फरक छैन। तर यूवी रोशनी छवि अन्तर्गत राति झन्झन् चमक हुनेछ।
एक रंग भवनहरु को FACADES सजाने गर्न सक्छन्। यो धेरै पत्रहरु मा, यो राम्रो copes समारोहहरुमा संग, तपाईं एउटा सानो मात्रा प्रयोग पनि लागू गर्नुपर्छ। सामाग्री को आवेदन समयमा अलिकति पानी संग पतला हुनुपर्छ। हुन काम सतह तयार: purified, degreased (साबुन वा सोडा समाधान), पानी संग धोए र सुकेको। उपकरण तपाईं रोलर, ब्रश वा चयन गर्न सक्नुहुन्छ स्प्रे रंग। अब तपाईं तयार हुनुहुन्छ। शुभकामना छ!
ब्रान्ड मा "Givenchy" झोला - शान को embodiment
अल्ट्रासोनिक सफाई: काम सिद्धान्त, प्रयोग लाभ र छनौट सुझावहरूको
प्रविधी र सुझाव: देखि कपडे गोंद कसरी हटाउने
स्टाइलिश Celine (थैला) - सधैं रोमान्टिक र मूल
यस चित्रकला "Troika" VG Perov: इतिहास र विवरण
जनक नेटवर्क: पहिचान, वर्गीकरण र आवेदन
खण्डका चिह्न के देखा र तिनीहरूलाई कसरी छुटकारा प्राप्त गर्न देखि?